အိန္ဒိယ ဥတ္တရာခန်းပြည်နယ်က နွားကို 'နိုင်ငံမိခင်'အဖြစ် သတ်မှတ်ရန်အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက် အတည်ပြု - Yangon Media Group
အိန္ဒိယ ဥတ္တရာခန်းပြည်နယ်က နွားကို ‘နိုင်ငံမိခင်’အဖြစ် သတ်မှတ်ရန်အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက် အတည်ပြု
နယူးဒေလီ၊ စက်တင်ဘာ ၂ဝ
အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ဥတ္တရာခန်းပြည်နယ် ပါလီမန်က နွားကို နိုင်ငံတော်၏မိခင်အဖြစ်ကြေ ညာရန်ဆုံးဖြတ်ချက်အား ကန့်ကွက်သူမရှိအတည် ပြုလိုက်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာက စက်တင်ဘာ ၂ဝ ရက်တွင်ပြောကြားလိုက်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ နွားကို ” Rashtra Mata ” ”နိုင်ငံမိခင်”အဖြစ် ကြေညာရန် စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်က အတည်ပြု ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
ဤဆုံးဖြတ်ချက်ရရန် ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးဝန်ကြီးရေခါးအရိယာက လုပ် ဆောင်ခဲ့ပြီး အတိုက်အခံများနှင့် ဝန်ကြီးအားလုံးတို့ကပါ ကန့်ကွက်သူမရှိထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ ဤဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရက အတည်ပြုနိုင်ရန်ပေးပို့ထားကြောင်းသိရသည်။ ဥတ္တရာခန်းပြည်နယ်မှာ နွားကို နိုင်ငံမိခင်အဖြစ် သတ်မှတ်သည့် ပထမဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်လာ ခဲ့သည်။
အရိယာက ဤဥပဒေအတည်ပြုပြီးပါက နွားကို နိုင်ငံမိခင်ဆိုသည့်အဆင့်အတန်းနှင့်အညီ သတ်ဖြတ်မှုကို တားမြစ်သွားရလိမ့်မည်ဟုပြော ကြားလိုက်သည်။ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုမှာ နွားကို အထွတ်အမြတ်ထားကြသော်လည်း တချို့ အိန္ဒိယလူမျိုးများက နွားသားကို တားမြစ်ချက်မရှိ စားသုံးသည်လည်းရှိသည်။
နွားများကိုကာကွယ်ရန် ဖခင်အုပ်စိုးသော ဟိန္ဒူလက်ယာစွန်းအဖွဲ့များက တောနက်များသို့ ဆင်းကာ နွားမသတ်ရေး၊ နွားသားမရောင်းချရေး တို့ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြသည်။ ¤င်းအဖွဲ့များက မော် တော်ကားများကိုစစ်ဆေးကာ နွားသားများရှာကြ သည်။ မကြာခဏ နွားသားရောင်းဝယ်သူများကို ရိုက်နှက်ခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။
သံသယရှိသူကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ဖမ်းဆီးနိုင်သည့် ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းရန် ကမ္ဘောဒီးယား စဉ်းစားနေ
မန္တလေးတွင် ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးပွဲ မသမာမှုများ ရှိသည်ဟုဆိုကာ ဒေသခံ ၁ဝဝ ကျော် လမ်းလေ?
ထိုင်းတွင် တရားမဝင် အလုပ်သမားများကို စဖမ်းပြီ၊ မြန်မာ လုပ်သားများကို ဖမ်းမိပါက ဂိတ်သုံးခု??
သွင်းကုန်များအပေါ် အခွန်နှုန်းထား သတ်မှတ်ခြင်းသည် သမ္မတထရန့်၏ စီးပွားရေး ဗျူဟာအမှားဖြစ်ဟု AP ??